Kedu ihe kpatara ntuli aka UNWTO ji bụrụ ihe mkpagbu maka UN na ndị isi ala?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » trending Ugbu a » Kedu ihe kpatara ntuli aka UNWTO ji bụrụ ihe mkpagbu maka UN na ndị isi ala?
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ka ọ ghara ịbụ njem nlegharị anya na-ebuga ọchịchị mgbagha ahụ na usoro UN!
Njem nlegharị anya bụ isi na foto a maka ihe abụọ.
Coup de grâce na usoro UN
Ọrịa ọjọọ a ebelatala usoro United Nations, na-akwado mpụta atumatu tumadi, ma ọ bụghị naanị, gbadoro ụkwụ na mba.
Òtù Azụmahịa Ụwa, chere arịrịọ India na South Africa ihu ka ha mee ka mmepụta nke ọgwụ mgbochi na-atọhapụ onwe ha, enweghị ike ime ihe ọ bụla banyere ya n'agbanyeghị nkwado dị ukwuu nke ọtụtụ ndị òtù ya, n'ihi nkwenye ya.
Òtù Ahụ Ike Ụwa bụ ndị a na-akatọ na mwakpo, bụ́ nke sitere na nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ime obodo nke ụfọdụ ndị òtù ya sitere.
Oku a na-akpọ maka ịgba ọgwụ mgbochi ọnụ na mba ndị nwere obere ego adaala na ntị chiri. Ọnụọgụ a na-egosi na mba ise ma ọ bụ iri agbaala ọgwụ mgbochi 75 ma ọ bụ 80% nke ndị bi na ha, ka kwụsiri ike ruo ọnwa ole na ole n'agbanyeghị na onye odeakwụkwọ ukwu ya na-echetakarị dị ka nke anabataghị.
Taa, ọnụ ọgụgụ a agbanweela, n'ihikwa ọganihu na ụfọdụ mba ndị nwere ọnụ ọgụgụ dị elu, mana ọnọdụ Africa ka dị oke egwu, dịka onye isi otu maka Africa chetara n'oge na-adịbeghị anya.
Mkpegharị nke odeakwụkwọ ukwu nke UN agabeghị nke ọma.
N'aka nke ọzọ, e dekọrọ nkwupụta nke otu nke mba ndị kasị baa ọgaranya na / ma ọ bụ ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nzukọ ha na-enwe oge, bụ nke naanị onye nwere nchekwube nwere ike ịlele dị ka ọ na-aṅa ntị na nsogbu nke mba ndị na-emepebeghị emepe.
N'ihe gbasara ọrịa na-efe efe, nke a nwere ike ịkwado mpụta ụdị ọhụrụ nke nje a.
Nsonaazụ dị ntakịrị nke COP26 bụ ihe ọzọ na-egosi oge adịghị mma maka ịdị n'otu mba ụwa.
Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ebumnuche geopolitical maka ime ka mmekọrịta mba ụwa sie ike. Ha gụnyere azụmaahịa, mbata, nkwụsi ike mpaghara na akụ na ụba ụwa, nke emetụtara, n'agbanyeghị na mpaghara na mpaghara na-ezighi ezi, site na ọrịa na-efe efe.
Nke mbụ bụ ntinye aka ya na GNP ụwa. Tupu ọrịa a, ọ dị ihe dị ka 10%, ma ugbu a ebelatala ya na 5%, yana mmetụta na-apụtaghị ìhè na oriri yana na ngalaba ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ngwọta ya dị na atụmatụ akụ na ụba nke mba niile, mana maka ụfọdụ mba, ọ dị oke mkpa, n'ihi na akụ na ụba ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, yana ntinye aka na GNP ha ruru 30%.
Nke a na-eme ka ọ dị oke mkpa na nzukọ ụwa ha dị ike ma nwee mmetụta maka nsogbu dị iche iche nke ụlọ ọrụ a na-enye dabere na njirimara nke mba. Ọ dị mfe ịtụ aro na mba ndị dị ka Russia ma ọ bụ United States, ma ọ bụ ọbụna ndị isi njem nlegharị anya Europe, iji kwado njem nlegharị anya nke ụlọ, mana ọ ga-abụ ihe ọchị iche na ụdị ahụ nwere ike ijere mba ndị dị ka Seychelles, Saint Lucia, ma ọ bụ obodo aka. Fiji.
Ma n'oge a, njem nlegharị anya nwekwara ike bụrụ ihe dị mkpa maka nkwụsi ike nke usoro United Nations n'ihi ọnọdụ - Nzukọ Mgbakọ nke UNWTO na-abịanụ, Òtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Ụwa.
N'okwu ya bụ nhọpụta nke odeakwụkwọ ukwu maka afọ anọ na-abịa.
N'ime otu Council Executive Council na-arụrịta ụka, ndị odeakwụkwọ ukwu abụọ gara aga ekwuola na a na-emegharị ya iji kpochapụ asọmpi maka mgbasa ozi ahụ.
Atụmatụ nke Council Executive ka ịhọpụta Zurab Pololikashvili ga-akwadorịrị site na 2/3 nke ndị otu mba na-aga Nzukọ Ọgbakọ.
Ihe a chọrọ sitere na iwu, nke e guzobere na 1978 na Buenos Aires, bụ nke na-esetịpụ ọnọdụ abụọ maka ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu site na ọtụtụ ndị ruru eru na vootu nzuzo.
Iwu abụọ ahụ bụ ihe gbasara ọnọdụ. Ọ bụrụ na a na-ajụ otu ajụjụ, ọ dịghị ihe mere a ga-eji chee na onye nke ọzọ nwere ọkwa dị elu na enweghị ike ịjụ ya.
Nke a na-atụ aro ịgbachitere na ịkwanyere ha ugwu dịka ihe nkwenye nke ịdị ọcha nke ihe omume kacha mkpa maka otu United Nations. Otú ọ dị, mgbasa ozi subliminal egosila na webụsaịtị nzukọ a nhọpụta ahụ dị ka nkwenye nkịtị, na na nnọkọ ọgbakọ na-esote, e chetara na ọ ga-abụ omenala ịghara itinye vootu nzuzo ọ gwụla ma mba ekpughere onwe ya. riọ ya.
Ọzọkwa, ụda egwu na-adịghị egwu egwu nke a na-akọwa ọnọdụ nke enweghị nchịkwa nke nzukọ ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụghị ratification nwere ike ịhapụ ụfọdụ mgbagwoju anya na onye na-agụ akwụkwọ na-enweghị isi.
Ọ bụghị ka ndị chọrọ ịpụ n'iwu dị adị ka ha buru ibu ọrụ ma tinye ihu ha n'ihu site n'ịrịọ otuto?
Nke a ga-achọ onye isi oche ogbako dịnụ, n'ihi ya, ọ dịịrị ndị odeakwụkwọ mfe icheta ọdịnala na-echefu na e nwekwara akụkụ dị egwu nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke onye na-ede akwụkwọ, onye bụbu onye ọrụ UNESCO na-akpọ icheta nke nwekwara nebulous. Mwepụ nke naanị Latin America na ntuli aka UNESCO 2017.
Mkparịta ụka kọmitii nkwado WTN
Ntuli aka nke Executive Board kwadoro taa bụ isiokwu nke arụmụka, nke World Tourism Network (WTN) Advocacy Committee haziri, nke m gara.
Ọ bụ arụmụka dabara adaba nke ukwuu, nke mkpa maka ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO iji hụ na nghọta na ikwesị ntụkwasị obi na ụkpụrụ nke jikọtara ndị ọrụ obodo UN niile meriri.
Nke a kwesịrị ịchọ nkọwa nke nkwupụta ikpeazụ na-echegbu onwe ya (ihe 48-50) nke akwụkwọ akụkọ Annual Officer nke Ethics Officer, mgbakwunye 1 na Report Human Resources, yana otu esi eduzi mkpọsa ntuli aka ziri ezi nke onye ndoro-ndoro ochichi, nke nlebara anya nwere ike ịdị. na-adọrọ mmasị na mmemme nke nleta ọrụ ya, karịsịa n'ime afọ 2019, okwu nke mba ndị òtù UNWTO chefuru nwere ike ịmasị ya.
Otu n'ime nsogbu ndị nwere ike imetụta nsonaazụ votu ahụ bụ ikpebi (ọ bụ n'ikike ya?) na mgbe ọkwa Morocco na-enweghị ike ịnabata ogbako n'ihi ọrịa ọjọọ (opekempe na Marrakech, ọ bara uru ịkọwapụta) , A ga-eme otu ihe ahụ na Madrid, na-eleghara onyinye Kenya anya, nke sitere na nhazi nhazi emeghị ka nsogbu na site na ọrịa na-efe efe dị n'ọnọdụ dị mma karịa Madrid.
E nwere ndị na-eche na nke a na-akwado ndị na-atụ aro nwa akwukwo, ma nke a agaghị abụ ikpe ma ọ bụrụ na ọnọdụ abụọ zutere, otu nke ikike nke General Conference: na-anabata na nzuzo nnọkọ nke Secretary General na-họọrọ nwere ike ịbụ ngwakọ, ihu na ihu - mebere, na-ekwe nkwa nzuzo nke votu, na ikike nke mba ndị ọzọ.
Ntuli aka na-ese okwu nwere ike ọ bụghị nanị ibibi UNWTO kamakwa ọ ga-ebuga mgbaghara ahụ na usoro United Nations.
Nke a abụghị okwu maka ndị Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na ọbụna obere maka ndị nnọchianya nke mba ndị a na-anọchi anya na Madrid, mana maka ndị na-ejide ikike nchịkwa.